Research Institute Wezingane ezithathelana FMBA Russia Petersburg - omunye ehamba phambili izikhungo emhlabeni yesayensi nezokwelapha ezikhethekile lapho sibhekene nezinkinga zezifo ezithathelwanayo ezinhlobo ezehlukene, ikakhulukazi - e esizukulwaneni esisha. Research Institute uwuhulumeni ezinkulu federal, ngaphansi kwegunya Medical-Biological Agency of the Russian Federation.
Kutholwe SRI ebuntwaneni izifo (Petersburg) Popov, 9 - isikhungo esingokomlando yenhloko-dolobha enyakatho, esiqhingini Apothecary. Yezefundo kukodwa izivakashi njengoba itholakala izakhiwo esibhedlela wangaphambili ukuze Egula ngengqondo futhi sezinzwa AG Konasevicha.
On abaqaphi impilo
Research Institute Wezingane ezithathelana (Petersburg) eRussia sikhungo yayo ehlukileko. Ngaphakathi kwezindonga eyinkimbinkimbi mlando we engcono abacwaningi odokotela wezwe udale uhlelo eziyingqayizivele luhlolo nokusesha yokwelashwa izifo ngempumelelo esatshwe kakhulu. Womnyango wezokwelapha ukuletha izingane wonke esifundeni North-West kanye nezinye izingxenye Russian Federation nge uphethwe, ngaphambi okuyinto bekhungathekile neminye imitholampilo.
Isikhungo ifakwe zobuchwepheshe, zakamuva okwamanje uchwepheshe ekilasini imishini kwezokwelapha, esetshenziselwa imisebenzi yocwaningo, ukuhlola, ukwelashwa. Ukusungulwa ezingeni lelisetulu ukuqeqeshwa kwabasebenzi. Muva nje, umtholampilo benza yokulungiswa esibanzi. Nakuba isakhiwo kuyinto izakhiwo ekhulwini ubudala, ngaphakathi abasebenzi bazama ukudala induduzo esiphezulu kanye lula ukuze izingane nabazali bazo.
Waba ikhaya emuva ngo-1927 i-Research Institute Wezingane ezithathelana Saint Petersburg. Usuku "ukuzalwa" Institute yezesayensi Esiwusizo Child and Engane Health (ebibizwa nge isikhungo) ubhekwa Februwari 14 - ngosuku isinqumo we inombolo iphuzu UMnyango wezeMpilo Leningrad wesifundazwe impilo izingane 4 uguqulwe ube isikhungo enkulu yocwaningo. Ngo-1930 SRI abayiswe Popov emgwaqweni (ex Sand), nesebenzela kuze kube yilolu suku.
Research Institute izifo Petersburg zezingane washintsha ngokuphindaphindiwe iphrofayela yakhe. Phakathi kwempi yezwe yesibili, ngesikhathi livinjezelwe, sikhungo wakhonza njengephayona esibhedlela sezingane, ngalesikhatsi kuchutjekwa ucwaningo. I 40-50s achazwayo amazinga yokuhlanzeka, okunengqondo yokudla izinhlelo, izindlela yenhlangano ezempilo imithetho ezikoleni kanye izingadi. Futhi benza ucwaningo lwembulunga yonke lokukhuluphala imisebenzi bokuphila umzimba wengane, ikhaliphe moya, le physiology izingane ziba abantu. Ngo-1961, lesi sikhungo lalenziwa esithathelwanayo: Ucwaningo nokwelashwa kwezifo ebuntwaneni Kwenziwa kusukela 1940.
Umqondisi, waqondisa Research Institute Wezingane ezithathelana (Saint Petersburg) kuwo wonke umlando saba khona, baye babamba iqhaza elikhulu abalulekile ekuthuthukiseni lesi sikhungo. Lokhu Uprofesa A. A. Matushak, A. Ya Goldfeld, V. N. Ivanov, AB Volovik LS Kutina, A. L. Libov, VN Bondarev, GA Timofeeva, Okufana ilungu Academy of Sciences Medical, uprofesa V. Ivanova. Banikela ekusungulweni ezingane kazwelonke kanye nezinsizakalo ezithathelwanayo.
Ngaphansi kokuqondisa yabo, Research Institute Wezingane ezithathelana (Petersburg), ngokuhlinzekwa kwezokulapha izingane abaphethwe izifo eziningi, lokuqhubeka kuchaziwe ukwelapha izifo ezithathelwanayo, substantiation yesayensi wathola izimiso kanye nezindlela ukwelashwa spa ngemva izifo ezithathelwanayo izingane convalescent zenzelwe. Isikhungo waklonyeliswa ngo-1975 ngenxa yosizo lwakhe kuya wobaba Order "Ibheji Ukuhlonishwa".
Ngo-2008 i-Institute eliholwa Worker Ezigcwalisiwe of Science, Academician we-Russian Academy of Sciences, uProfesa Y. Lobzin kanyekanye esimisiwe Shona Specialist Nkonzo wezeMpilo Pediatric Infectious Diseases. Wawuyini umgomo wazo wokuqala kule nkathi kwaba nokuvulwa base impahla kanye lobuchwepheshe. laboratories zocwaningo Kubuyekeziwe Research Institute Wezingane izifo umnyango sinenkonzo yokunakekela iziguli emakhaya, wezokwelapha isakhiwo sikhungo.
I impumelelo esemqoka ziye owethulwa emva kulungiswe main umzimba 350 imibhede emitholampilo (November 2010), izakhiwo zokuphatha kanye zokwelapha, kanye kuhlomisa sikhungo ngamathuluzi yesimanje kokubili uphethwe wezinsimbi futhi laboratory.
Manje abasebenzi Institute of Pediatric ezithathelana (Petersburg) is ikakhulukazi wahlanganyela izinkinga ezilandelayo:
ekuthuthukiseni izinqubo lokugoma yenhlangano;
ukuhlinzekwa kwezokulapha izingane abaphethwe pathologies samafayela;
substantiation yesayensi lamasu zokwelapha.
isakhiwo Research Institute
I Institute eyishumi nesithupha neminyango zezemfundo. Umhlangano omkhulu kunayo yonke kubo basafunda neuroinfections, isifo sokusha kwesibindi kohlobo viral, uyisithulu, ukuvuza, izifo emathunjini, zokugula organic isimiso sezinzwa, izifo zesibindi, nokuvinjelwa, izimo ukunakekelwa okuphuthumayo ngomfutho, futhi kwezinye izindawo.
Iminyango okudalwe lenhlangano kwezokulapha, kanye nezifo azalwa nako. Ukusungulwa ezinhlanu-kwesibeletho amayunithi zokuxilonga:
microbiology yamangqamuzana, lwezifo;
division nezicubu zokugula izindlela.
Ihlangano yokuNgeza Wezingane ezithathelana (Petersburg) has a abaqeqeshiwe kakhulu ngokwesayensi. Bahlanganisa 20 odokotela, kuhlanganise osolwazi 11, 5 umhlobo osolwazi 1 academician, 1 ilungu elihambisana zezinqama, 2 abasebenzi ahlonishwe isayensi 27 ukhetho wesayensi.
Ngesisekelo yesayensi zocwaningo Institute of umsebenzi izikhungo yesayensi ezingokoqobo ezilandelayo:
herpes igciwane izifo;
izifo azalwa naso;
uphawu yizinambuzane izifo;
ukugoma izingane kanye nabantu abadala;
izingane Hepatology Centre.
esingathí sina izikhungo zocwaningo ukumelwa okunjalo ivumela ukwelashwa okukhethekile kanye nezeluleko iziguli profiled ku Russian Federation, ukwakha irejista okuhambisanayo iziguli nokuxhumanisa ucwaningo ezindabeni ezibalulekile.
Yezefundo kusizinda yayo, isikhungo engcono yesayensi nezokwelapha, a eyingqayizivele ngempela uma kuziwa okuhlinzeka izikhungo zokunakekela zezokwelapha onekhono kakhulu usebenzisa yakamuva zokuxilonga kanye nokwelashwa ubuchwepheshe.
Lesi sikhungo eyakhelwe uhlelo imikhakha eyahlukene elikuvumela ukusebenzisa ulwazi nodokotela iqembu elikhulu ososayensi kusukela nezokwelapha ezahlukene ukuxazulula eziningi izinkinga ezihlobene impilo yezingane. Ngenxa yale njongo, isicelo ubuchwepheshe yezokwelapha ubufakazi-based, okuyinto ezimweni eziningi ziwumphumela kwenziwe ucwaningo sikhungo sika siqu.
imishini kwezokwelapha ekilasini Modern uchwepheshe ifakwe umtholampilo Research Institute Wezingane izifo umnyango sinenkonzo yokunakekela iziguli emakhaya, labagula iyunithi, okuvumela ukunikeza labagula kakhulu izingane ngezifo ezithathelwanayo ezinzima kanye izilonda eziphilayo isimiso sezinzwa esiyinhloko. Isikhungo kuthatha e-nesineke nokwelashwa kwezingane kuzo zonke izifundo RF, kubandakanya neziguli amafomu kuyinkimbinkimbi ezinzima futhi izifo ezidinga eyinkimbinkimbi yosesho kusebenta kwahulumende.
Enye yezindawo womsebenzi we-Institute kuyinto zokuvimbela eqondile yezifo ezithathelwanayo. Ngokokuqala ngqá e izibhedlela Petersburg lamiswa, kwaba lapho kungenzeka ukuba bagome izingane engozini nge zokugula kuhlangene, engaziwa lokugoma umlando ngaphansi kokuqondisa izisebenzi zezokwelapha oqeqeshiwe.
Ukuvuselelwa izingane ene-cerebral palsy
Ngokokuqala ngqá e-Russia e-Institute isimiso esibanzi nokuvuselelwa yezokwelapha izingane wadalula ezinzima ukunyakaza zempilo, kuhlanganise ne-cerebral palsy (CP), usebenzisa amadivaysi zobuchwepheshe ukuthi ahlinzeke inhlanganisela umzimba nge ubuchwepheshe kunendawo enkulu engahlolwa amarobhothi ka biofeedback futhi functional ezishukumisayo kagesi. Ngaphezu izinqubo nokuvuselelwa kwethulwa isifundo zokuxilonga usebenzisa optical sendawo uhlelo elikuvumela ukukhomba zokugula of the system zemisipha ngaphandle ukuchayeka ngokuqhubekayo emisebeni.
ukwelashwa Ukuvuselelwa, kuhlanganise mechanotherapy kunendawo enkulu engahlolwa amarobhothi, bamukela izingane esigabeni oyingozi ezithathelwanayo nge umsebenzi kahle isimiso sezinzwa (central kanye neuropathy), kanye neziguli kanye nezimpawu asalile izifo.
Material futhi base lobuchwepheshe
izimo ukhululekile for iziguli emtholampilo sikhungo. Yonke indawo kulungiswe kukhiqizwa. Amahhovisi babe amabhokisi kathathu futhi quadruple, kanye amakamelo olulodwa futhi double aphakeme. Izakhiwo anemisila ifenisha ergonomic, amatafula ngabanye, imibhede obukhethekile omatilasi wamathambo. Ebhokisini ngalinye kukhona inkinobho eziphuthumayo izisebenzi.
Ngaphakathi kohlaka okubhekiswe Uhlelo federal kutshalozimali kanye nokusekela siqu uMphathi FMBA V. Uyba ugcwaliseka ngokugcwele isiphakamiso sokwakha isakhiwo esisha yomtholampilo, nokuthuma okuyoba neqhaza ukwanda okuphawulekayo we Institute ekuthuthukiseni izindlela ezintsha uphethwe, nokuvinjelwa kwezifo ezithathelwanayo ngo izingane, kanye ukwenza ngcono izimo babanike ukwelashwa.
Izibhedlela eziningi jikelele wathumela iziguli kunzima ukuyelapha ngesikhathi Research Institute of ebuntwaneni izifo. Izibuyekezo iphathwa lapha izingane nabazali bazo ukukhombisa izinga okusezingeni eliphezulu ukuqeqeshwa of odokotela base wezokwelapha nezobuchwepheshe kakhulu. Nazi okungcono ezisezikhungweni Russian zokuxilonga kanye nokwelashwa. Kukhona ehlukile (LCA) kanye jikelele (OMC) amabhokisi, kukhona yangasese, indlu yangasese.
Izinzuzo: kwabasebenzi abaqeqeshiwe, ukuba khona amakamelo ehlukene, izinto ezinhle kakhulu futhi base lobuchwepheshe, nangokuhlanzeka.
Nebubi: kukhona ezinye izikhalazo ku ukudla, ukungabi amatafula kokushintsha, kudingeka ukuba ingenzele incwadi eningi wamaphepha ngaphambi kokungena Research Institute ezithathelana Wezingane.
Polyclinic kanti ezinye amakamelo ekukhetheni izindlela zokwelapha zitholakala kwelinye ibhilidi, yingakho kufanele siphume, ingubo, khumula izingubo uma uvakashela izinqubo lapho kubanda. Kufanele kuqondwe ukuthi lena akuyona indawo, futhi acabangele isici womuntu.
Research Institute Wezingane ezithathelana (Petersburg): kanjani lapho
Institute itholakala sizikhandle ngokwanele, abahlala engxenyeni ephakathi Petersburg, 850 amamitha kusuka metro station "Petrogradskaya" (eMoscow-Petrogradskaya Line). isikhungo Ikheli: USolwazi Popov emgwaqweni, 9 (eduze Botanical Gardens). Eduze sikhungo iyinombolo sebhasi 128.
Ngemoto, uma ukuthuthela engxenyeni esenyakatho yedolobha, kuya Research Institute kungenziwa esafinyelelwa Kolomyazhsky Avenue ke ngokusebenzisa Ushakovsky ibhuloho futhi Kamennoostrovsky Avenue Apothecary esiqhingini. Uma indlela yakho itholakala empumalanga, ungakhetha umzila Kantemirovskaya emgwaqweni - Avenue Medics, noma ukudabula Grenadier ibhuloho. Kusukela eningizimu kungcono ukuba balungise Troitsky Ibhuloho yonkana ebanzi Kamennoostrovsky themba.
Ngaphansi kwesimo esinzima isimo epidemiological global kanye nokudlondlobala okwandisa lesi sifo izifo ezingavamile egqoke atypical, SRI ebuntwaneni izifo (Petersburg) uthola kulondolozwa azungeza iziguli eziningi ezincane.
Central Research Institute Gastroenterology
City №1 polyclinic, Novosibirsk, izithombe kanye nokubuyekeza
Sibhedlela "Avangard" (Sochi): ukubuyekezwa, izincazelo, umlando
Ukwelashwa nokuvikelwa Izifo Parkinson kwa-Israyeli
Ngo kokukhulelwa kwesibeletho eJalimane
Itheku isigqi - kuyini? Kusho ukuthini itheku isigqi inhliziyo?
Into evimbela emphinjeni, noma Izimbangela ze-coma
"Ruble 500" (ihlelo): indlela ukucacisa ubuqiniso bayo
Skoda Superb. Izibuyekezo
Zezinwele for abafana ingane: indlela yokunakekela izinwele futhi ukhethe kwekhanda.
Ibhukwana: indlela yokudweba insimbi nge ipensela kanye nopende